Uhlelo lukaBayer lokuxazulula izimangalo zomdlavuza zeRoundup zesikhathi esizayo lubhekene nokuphikiswa okukhulu - Ilungelo Lokwazi laseMelika
Posted on February 26, 2021 by UCarey Gillam
Izinkampani eziningi zezomthetho zase-US sezisungule umfelandawonye wokulwa ne- $ 2 billion entsha isiphakamiso sokuhlala ngumnikazi weMonsanto uBayer AG ohlose ukuqukatha isikweletu esiqhubekayo senkampani esihlobene nezimangalo zokuthi imishanguzo yokubulala ukhula iRoundup idala uhlobo lomdlavuza olwaziwa njenge-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
Lesi sivumelwano senzelwe ukunxephezela abantu abake bavezwa yimikhiqizo ye-Roundup futhi asebevele benayo i-NHL noma bangathuthukisa i-NHL ngokuzayo, kepha abangakazithathi izinyathelo zokufaka icala.
Iqembu elincane labameli abahlanganisa lolu hlelo neBayer bathi "luzosindisa izimpilo" futhi linikeze izinzuzo ezinkulu kubantu abakholelwa ukuthi baba nomdlavuza ngenxa yokuvezwa yimikhiqizo yenkampani yokubulala ukhula.
Kepha abameli abaningi abagxeka lolu hlelo bathi uma luvunywa luzobeka isibonelo esiyingozi kwezinye izinhlobo zamacala athinta inqwaba yabantu abalimele yimikhiqizo noma imikhuba yezinkampani ezinamandla.
"Lesi akusona isiqondiso esifuna uhlelo lwezobulungiswa luhambe," kusho ummeli uGerald Singleton, inkampani yakhe ejoyine nezinye izinkampani zabameli ezingaphezu kuka-60 ukuphikisana nohlelo lukaBayer. "Asikho isimo lapho lokhu kuhle kwabamangali."
Uhlelo lokukhokha lukaBayer lwafakwa eNkantolo yesiFunda sase-US esifundeni esiseNyakatho neCalifornia ngoFebhuwari 3, futhi kumele livunyelwe yiJaji Lesifunda sase-US uVince Chhabria ukuze lisebenze kahle. Uhlelo lokukhokhelwa ngaphambi kwesikhathi olwethulwe ngonyaka odlule lwalungu- edelelwa uChabria abese ehoxa. Ijaji belibheke ukwedluliswa kwamacala e-federal multidistrict Roundup okubandakanya izinkulungwane zabamangali abavela e-United States.
Izimpendulo zohlelo lokukhokha kumele zilindeleke ngoMashi 3 bese kulalelwa lolu daba kulindeleke ukuthi kube ngoMashi 31.
Okukhathaza kakhulu ukuthi abasebenzisi be-Roundup bamanje abangahle babe nomdlavuza futhi bafune ukumangalela ngokuzayo bazoba ngaphansi kwemibandela yokuxazululwa kwezigaba ngaphandle kokuthi baphume ngokusemthethweni kuleyo nkathi esikhathini esithile. Omunye wemibandela abazobe bekhonjelwe wona uzobavimba ekufuneni ukulimala kokujeziswa kunoma yiliphi icala elizayo.
Leyo migomo neminye ebekiwe ayinabulungiswa ngokuphelele kubasebenzi basemapulazini nakwabanye okulindeleke ukuthi babe nomdlavuza ngokuzayo kusukela ekuvezweni yimikhiqizo yenkampani yokubulala ukhula, ngokusho kukaSingleton. Lolu hlelo luzuzisa iBayer futhi luhlinzeka "ngemali yegazi" ezinkampanini ezine zabameli ezisebenzisane neBayer ukwakha lolu hlelo, esho.
Lawo mafemu asebenzisana neBayer ukusungula nokuphatha uhlelo bazothola isamba esihlongozwayo esingu- $ 170 million uma uhlelo luqala ukusebenza.
U-Elizabeth Cabraser, ongomunye wabameli abakha lesi sakhiwo esisha esihlongozwayo, uthe ukugxekwa akuyona incazelo efanelekile ngalesi sivumelwano. Empeleni, uthe lolu hlelo “lunikeza ukufinyelela okubalulekile futhi okudingeka ngokushesha, imfundo, ukufinyelela kwezempilo, kanye nezinzuzo zesinxephezelo” kubantu abake bathola umuthi wokubulala ukhula weMonsanto's Roundup kodwa abangakenzi i-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
"Sifuna ukwamukelwa kwalesi sivumelwano ngoba sizosindisa izimpilo futhi sithuthukise nezinga lempilo ngokuxilonga kusenesikhathi, sisize abantu… sibazise futhi siqwashise umphakathi ngobudlelwano obuphakathi kweRoundup neNHL…" esho.
Okhulumela iBayer akaphendulanga esicelweni sokuphawula.
Indawo entsha ehlongozwayo kuhloswe ngamacala azayo futhi ahlukile ku- $ 11 billion iBayer ebekelwe ukukhokhela izimangalo zomdlavuza ezikhona zase-US. Abantu abathintwe yisiphakamiso sokukhokhelwa kwesigaba kungabantu nje kuphela abaye bavezwa ku-Roundup kepha abakabi kumacala futhi abakathathanga zinyathelo kunoma yiliphi icala.
IBayer ibinenkinga yokuthola ukuthi ingaqedwa kanjani amacala omdlavuza weRoundup selokhu ithenge iMonsanto ngo-2018. Le nkampani ilahlekelwe yizo zonke izilingo ezintathu ebezibanjiwe kuze kube manje futhi yalahlekelwa yizikhalazo zokuqala ezazifuna ukuguqula ukulahleka kwecala.
Amajaji kwesinye nesinye sezivivinyo akatholanga lokho kukaMonsanto kuphela ukhula lwe-glyphosate-based kubangela umdlavuza kepha nokuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka efihla izingozi.
Yize lesi sivumelwano esihlongozwayo sithi “sibhekana nezikhalazo ezine ezaphakanyiswa iNkantolo maqondana nesinqumo sangaphambili, esasihoxisiwe,” u-Singleton nabanye abameli ababandakanyeka kweqembu eliphikisayo bathi lesi sicelo esisha sokubhadala simbi njengaleso sokuqala.
Ngaphezu kokukhathazeka ukuthi amalungu ekilasi ngeke abe nelungelo lokufuna izicelo zokukhokhelwa isijeziso, abagxeki baphikisana nesikhathi seminyaka emine "sokuma" esivimba ukufakwa kwamacala amasha. Abagxeki bathi futhi uhlelo lokwazisa abantu ngokuhlala ngezigaba alwanele. Abantu bazoba nezinsuku eziyi-150 ngemuva kwesaziso sokuthi “baphume” ekilasini. Uma bengaphumi, basekilasini ngokuzenzekelayo.
Abagxeki baphikisana nokwakhiwa okuhlongozwayo kwephaneli lesayensi elizosebenza "njengesiqondisi" sokwengezwa kwezinketho zesinxephezelo esikhathini esizayo "nokunikeza ubufakazi mayelana nokubulawa kwe-carcinogenicity - noma cha - kweBayer. Njengoba kunikezwe umlando obhaliwe kaMonsanto wokukhohlisa okutholakele kwesayensi, umsebenzi wephaneli lesayensi uzoba yinsolo, kusho uSingleton.
Isikhathi sokuqala sokukhokha sasizosebenza okungenani iminyaka emine futhi singanwetshwa ngemuva kwalesi sikhathi. Uma iBayer ikhetha ukungaqhubeki nesikhwama sesinxephezelo ngemuva kwesikhathi sokuqala sokukhokha, izokhokha enye imali eyizigidi ezingama- $ 200 njenge- “pay end” esikhwameni sesinxephezelo, kusho isifinyezo sokukhokha.
Kunikezwe “isinxephezelo esikhulu”
Amafemu abhalise isivumelwano neBayer athi ekufayeleni kwabo enkantolo ukuthi lesi sivumelwano sihlelelwe ukunikeza abamangali abangase babe khona lokho "okufeza izintshisekelo zabo," kufaka phakathi ithuba lokuthola "isinxephezelo esikhulu" uma bethuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma .
Lolu hlelo ludinga ukusungulwa kwesikhwama sezinxephezelo ukwenza imiklomelo ephakathi kuka- $ 10,000 kuya ku- $ 200,000 ngelungu ngalinye lesigaba. "Imiklomelo Yokukhokha Esheshayo" engu- $ 5,000 izotholakala ngokushesha, okudinga nje ukukhonjiswa kokuchayeka nokuxilongwa.
Labo bantu baqale ukuvezwa kumikhiqizo ye-Roundup okungenani izinyanga eziyi-12 ngaphambi kokutholakala kwabo bazokwazi ukuthola imiklomelo. Imiklomelo engaphezulu kwama- $ 200,000 ingenziwa "ngezimo ezingavamile." Lawo malungu ekilasi afanelekayo atholakale ene-NHL ngaphambi kukaJanuwari 1, 2015, ngeke athole imiklomelo engaphezu kwe- $ 10,000, ngokwecebo.
Isivumelwano sizohlinzeka ngezeluleko zamahhala zomthetho futhi sinikeze ”ukwesekwa ukusiza amalungu ekilasi ekuzulazuleni, ekubhaliseni nasekufakeni izicelo zemihlomulo yokuhlala.”
Ngokwengeziwe, lesi siphakamiso sithi ukukhokhelwa kuzokhokhela ucwaningo lwezokwelapha nolwezesayensi ekutholeni nasekwelapheni i-NHL.
Okuqaphelekayo, uhlelo luthi akekho umuntu ozolahlekelwa yilungelo lakhe lokufaka icala ngaphandle uma ekhetha ukwamukela isinxephezelo esikhwameni sesinxephezelo, futhi akekho noyedwa odinga ukwenza lokho kuze kube lelo lungu lesigaba ngasinye litholakala ukuthi line-NHL. Bebengeke bakwazi ukufuna umonakalo wokujeziswa kepha bebengafuna esinye isinxephezelo.
“Noma yiliphi ilungu lesigaba elingafaki isimangalo futhi lamukele isinxephezelo somuntu ngamunye ligcina ilungelo lalo lokumangalela iMonsanto ngokukhokhelwa isinxephezelo kunoma iyiphi inkolelo-mbono yezomthetho, okubandakanya ukulimala komuntu, ukukhwabanisa, ukumelwa ngendlela engeyiyo, ubudedengu, ukufihla inkohliso, ukumelwa kabi ngobudedengu, ukwephula iwaranti, ukukhangisa okungelona iqiniso , nokwephula noma ikuphi ukuvikelwa komthengi noma umthetho noma izenzo ezingalungile nezikhohlisayo, ”kusho uhlelo.
Ukuqwashisa abantu ngokuxazululwa kwesenzo sekilasi, izaziso zizothunyelwa ngeposi / zithunyelwe nge-imeyili emapulazini, amabhizinisi nezinhlangano ezingama-266,000 kanye nezinhlangano zikahulumeni lapho ukubulala ukhula kwenkampani bekungasetshenziswa kanye nabantu abangama-41,000 abangenayo iHodgkin lymphoma futhi bacelwe ukuthola imininingwane ngesifo sabo. Ngokwengeziwe izingqwembe zizothunyelwa ngeposi ezitolo ezingama-2,700 XNUMX zibacela ukuthi babhale izaziso zokuxazululwa kwezigaba zesigaba.
Njengengxenye yendawo yokuhlala ehlongozwayo, iBayer ithe izofuna imvume kwa-Environmental Protection Agency (EPA) yokwengeza imininingwane kumalebula emikhiqizo yayo esekwe ku-glyphosate efana ne-Roundup ezonikeza izixhumanisi zokufinyelela kwizifundo zesayensi kanye nolunye ulwazi mayelana ne-glyphosate ukuphepha. Kodwa abagxeki bathi ukuhlinzeka ngezixhumanisi zewebhusayithi akwanele futhi iBayer idinga ukubeka isexwayiso esiqondile sengozi yomdlavuza emikhiqizweni yokubulala ukhula.
Ukuxazululwa kwesenzo esenziwe ngezigaba kusongela ukuthinta “amakhulu ezinkulungwane noma ngisho izigidi” zabantu abaye bavezwa i-Roundup futhi "baphakamisa imibuzo 'eyingqayizivele' futhi ejulile" ngaphansi koMthethosisekelo wase-US, ngokusho kuka inkantolo yokugcwalisa ngokuphikisana nohlelo lweBayer olwenziwe ngummeli wabamangali u-Elizabeth Graham.
UGraham utshele inkantolo ukuthi uma lolu hlelo lwamukelwa lungaba "nomthelela omangazayo hhayi kuleli cala kuphela, kepha nakusasa lecala lokuhlukunyezwa kwabantu abaningi."
INational Black Farmers Association (NBFA) ilinganisele lolu daba ngoLwesithathu, yafaka ukugcwaliswa okude nenkantolo kaChhabria ethi "ingxenye enkulu" yamalungu ayo angaphezu kwe-100,000 "adalulwe futhi angalimala yiRoundup, kanye nesithako sayo esisebenzayo i-glyphosate."
Iningi labalimi selivele lisungule i-lymphoma engeyona eye-Hodgkin abasola ngokusetshenziswa kwe-Roundup, futhi "ingebhe enkulu kakhulu ukuthi bazosheshe babe nezimpawu," kusho ukugcwalisa kwe-NBFA.
I-NBFA ifuna ukubona imikhiqizo ye-Roundup isuswa kwezentengiselwano noma kwezinye izinguquko ezenziwe ukuvikela abalimi, kusho ukufayila.
Ukukhathazeka kwe-NBFA kudinga ukuthi kubhekwane nakho yinkantolo, ikakhulukazi njengoba iBayer ibheka “ukulungisa isenzo sesigaba ngeqoqo labameli abathi bamele izintshisekelo zabo bonke abalimi abadalulwe ku-Roundup kodwa abasazothuthukisa kubangela umdlavuza. ”
Amacala enkantolo e-Australia
Njengoba iBayer isebenza ukuqeda amacala eRoundup e-United States, inkampani nayo ibhekene nezimangalo ezifanayo zabalimi nabanye abase-Australia. Isenzo sekilasi esifakwe iMonsanto siyaqhubeka, kanti ummangali oholayo uJohn Fenton, owafaka isicelo seRoundup njengengxenye yomsebenzi wasepulazini. UFenton watholakala ene-non-Hodgkin lymphoma ngo-2008.
Uchungechunge lwezinsuku ezisemqoka selusunguliwe: IMonsanto inangoMashi 1 ukuhlinzeka ngemibhalo yokutholwa kwabameli babamangali kanti uJuni 4 yisikhathi esinqunyiwe sokushintshaniswa kobufakazi bochwepheshe. Amaqembu azongena ekuxazululeni ngoJulayi 30 kanti uma kungenakutholakali lutho leli cala lizoqala ukuqulwa ngecala ngoMashi 2022.
UFenton uthe yize "ezolithanda ithuba" lokuthi aquliswe icala axoxe indaba yakhe, unethemba lokuthi ukulamula kuzoxazulula lolu daba. “Ngicabanga ukuthi ukuvumelana sekuqala ukushintsha ngenxa yalokhu ebekwenzeka eMelika. Abalimi sebazi kangcono futhi ngikholwa wukuthi bathatha izinyathelo zokuqapha ezingaphezu kwezangaphambili.
UFenton uthe unethemba lokuthi iBayer ekugcineni izobeka ilebula lokuxwayisa emithini yokubulala ukhula yeMonsanto.
"Okungenani ngesexwayiso umsebenzisi angazenzela eyakhe ingqondo ngokuthi iyiphi i-PPE (imishini yokuzivikela) akhetha ukuyigqoka."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, inkantolo, imvelo, EPA, glyphosate, zezempilo, ukhula, icala, zomthetho, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, ababulali bokhula